ब्राम्हण पत्नीले भनिन्,जसले मेरो चना खान्छ त्यो जीवनभर दरिद्र होस| Nepal Pati
चैत्र १५ गते राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त सभालाई संवोधन गर्दा मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको भन्न लगाइयो । निर्वाचन पूर्व र निर्वाचन पछी ओली सरकारको गायत्री मन्त्र नै बनिसकेको समृद्धी र मुर्छित सपना पुरा गर्ने ढुकुटी प्रधानमन्त्रीको आशा अनुरुप नरहेको जानकारी अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले गर्दैछ ।
संघीयताले अथाह खर्च बढाएको, राजश्व बढ्न नसकेको, ब्यापार घाटा चुलिएको , रेमिट्यान्स घट्दै गएको, पुनर्निर्माणको काम सुस्त भएको अर्थमन्त्रीले बताईरहँदा ओली सरकारलाई कटाक्ष गरिरहेको आर्थिक सुचकाङ्कले शिखरमा पुर्याइएको समृद्धि शब्दको भविष्यमा के हुन्छ ? भन्ने जिज्ञाशाा हवात्तै बढ्दै छ । आँखिर तीन करोड नेपालीको ध्यान खिच्न सफल समृद्धी कसरी आउँदैछ ? यसका निम्ती देशवाशीले के कस्तो वलिदान दिनु पर्नेछ ? बर्तमान प्रधानमन्त्रीले ल्याएरै छोडने समृद्धीको सुरुवात कहिले, कहाँ र कसरी हुनेछ ? भन्ने कुतुहलता तमाम देशवाशी र विदेशी नियोग सम्म फैलिएको छ । भर्खरै जाग्दै गरेको समृद्धि शब्दलाई बचाउन नेपाली सुदामाको खोजी झन ब्यापक बन्न जाँदा सुदामाको कहानी जान्नै पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
द्वापर युगमा बृन्दावनको नजिकै एक बृद्ध ब्राहमण पत्नी मागेर जीवन गुजारा गर्थिन । एक पटक ब्राम्हण पत्नीले पाँच दिन सम्म माग्दा पनि केही पाउन सकिनन । छैठौं दिनमा पानी मात्र पिएर वासुदेवको नाम लिंदै सास धानेकी ब्राम्हण पत्नीलाई एक सज्जन पुरुषले एक मुट्ठी चना कुटीमै दिन आए । अकस्मात आईमिलेको चनालाई एउटा पोकोमा कस्दै गर्दा खुसीले भुसुक्कै निदाइन । रातको समय चोरहरु ब्राम्हण पत्नीको घरभित्र प्रवेश गरे । बहुमुल्य सामान फेला पार्न नसक्दा त्यही चनाको पोको लिएर हिडे । अर्को गाँउ पुगेका चोरहरु एउटा कुटीमा प्रवेश गरे । अचानक आएको आवाजले उनीहरु पोको छोड्दै भागे । रातको समय भोकले ब्याकुल ब्राम्हण पत्नी बिउँझिन पुगिन तर चनाको पोको नपाउँदा श्राप दिदै भनिन । जसले मेरो चना खान्छ त्यो मानिस जीवनभर दरिद्र होस् ।
चोरहरुले चनाको पोको छोड्दै भागेको घर सुदामा र भगवान कृष्णको गुरुको घर परेछ । संयोग नै मान्नु पर्छ, त्यस समय सुदामा र भगवान कृष्ण अध्ययनको शिलशिलामा त्यसै कुटीमा थिए । गुरुआमाले शिष्य सुदामालाई चनाको पोको दिदै भनिन । सुदामा यो चना तिमी र कृष्णले आधा आधा बाँडेर खानु । आध्यामिक ज्ञानले सबै देख्न सक्ने सुदामाले गुरु आमाको कुरालाई काट्दै सम्पुर्ण चना आफैले खाइदिए । त्रिभुवन पती भगवान कृष्णलाई चना खान दिएर संसार दरिद्र बनाउँन उनको मन राजी भएन । आध्यात्मिक रुपले अत्यन्तै धनी सुदामा ब्राम्हण पत्नीको श्रापलाई जान्दाजान्दै पनि सम्पुर्ण चना खाएर द्वापर युगकै दरिद्र मनुष्य बन्न राजी भए । सुदामाद्वारा चालीएको त्यागले दोस्तीको नयाँ मिसाल कायम हुन पुग्यो ।
विश्वकै पुराना मुलुक मध्यमा पर्ने नेपाल कहिल्यै दरिद्र थिएन । नेपालको असली गुणलाई देखेका र चिनेका शक्तीहरु अनेक बहानामा नेपाललाई दरिद्र बनाउँन लागेको अनुभव पछिल्लो समय सर्वसाधारण समेत गर्दैछ्न । राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक मात्र हैन संबैधानिक रुपले नै नेपाललाई दरिद्र कोटीमा पुर्याउन लागेका दक्षिण, पश्चिम र देशकै कुर्सी बाजहरुको कारण इतिहासकै कठिन अवस्थामा मुलुक पुर्याइएको महशुस गरिदैछ । संविधान जारी गर्दा दक्षिणले र संविधान कार्यान्वयन गर्दा पश्चिमा इसाईले बोलेको धावा रुपमा अलग रहे पनि सार भने एकै रहेको बुझ्न सकिन्छ । आँखिर नेपालको सार्वभौम सत्ता माथी कहिले दक्षिणले र कहिले पश्चिमा इसाईले किन प्रहार गर्दैछ्न ? संविधान भित्रको अन्तरबस्तु किन दक्षिण र पश्चिमको आकर्षणको कारण बन्दैछ ? नेपाल माथी निरन्तर भइरहेको हस्तक्षेप र दुस्साहसको कारण उनीहरुको शक्ती हो कि हाम्रो राजनैतिक शीर्ष नेतृत्वको कमजोरी हो ? खोज्न विगत तिर फर्कनु पर्नेछ ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण साहले देश निकाला गरेको रिस र संसार भर शासन गर्दा पनि नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिन असफल भएको इसाईहरुको कालो मन अनेक बहानाको खोजी गर्न लागी रह्यो । सिंहदरबारले संधैभरी अति बिशिष्ट छिमेकी मानेको भारत दक्षिण एसियामा तीन वटा राजतन्त्र देख्न चाहदैन थियो । भुटानले सन १९४८ मै भारतीय इच्छा अनुरुप चल्न राजी हुँदा पाएको हैसियत सिक्किम र नेपाललाई ्दिने अन्यथा चाहे अस्तित्वनै मेटी दिने सन्देश सिक्किमलाई २२ औं राज्य बनाउँदै दिइसकेको थियो । आफ्नै आन्तरिक कारणले नेपाल नीति बदल्न बाध्य भएको भारतको कारण इसाईहरुले आफ्नै बाटो रोजे । नेपालको शैक्षिक जनशक्तीनै निकम्मा पारी दिने खेल अन्तर्गत २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागु गराउँन सफल भए । अनुपयुक्त शिक्षाको कारण सामाजिक र नैतिकवल गुमाएको युवाशक्तिलाई दिग्भ्रमित बनाउँदै नेपालमा जरा गाडे । २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन संगै दक्षिणको राजनीति केही सिमित नेता र ब्यक्तीलाई उपचार खर्च , छोराछोरी अध्ययनको चाँजो पाँजो, राजनैतिक ब्यबस्थापन, दैकिन खर्चको जोहो र अनेक नामका संस्था र फाउण्डेसन मार्फत उनीहरुलाई स्थापित गर्न मै सिमित रह्यो । इसाईहरु धेरै पछाडीको सोच्दै धर्म, जाती र संस्था नै समाप्त गर्न अनेक नामको श्रापयुक्त चना निर्माण गर्न लागे ।
दलाल अर्थतन्त्र मार्फत आत्म निर्भर अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारी दिने , वर्गिय राजनीतिलाई धर्म र जातमा बिभाजित गरी दिने, शासक जाती र शोसित जाती भन्दै जनजातीलाई भड्काउने जातीय घृणा र धार्मिक सदभाव भड्काउन पानी झै पैसाको खोलो बगाउने, अशिक्षा गरीबिको फाइदा उठाउँदै धर्म परिवर्तन गराउँने खुला मैदान राजनैतिक अस्थिरताको नाममा पाए । अनेक नामका जातीय मोर्चा, महासंघ र जातीय पार्टी खोल्दै दीर्घकालिन लक्ष हाँसिल गर्ने खेलमा ठुलो झटका लाग्न पुग्दा अर्ती उपदेश दिंदै पुरानो हिसाव माग्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई द्वन्दमा उतार्न सफल इसाई रणनीति हारेर पनि जित्ने झगडाको बिउ रोप्न सफल भइसकेको छ । एमाले र माके भित्र डेरा जमाएको इसाई तागतलाई अन्देखा गर्दै अरिगाँलको गोलोमा ढुँङ्गा हान्ने प्रधानमन्त्री कदमलाई वास्ता नगर्नुले उनीहरुको नियत खुलेर आएको मान्न सकिन्छ । नितान्त पैसाको बलमा नेपालको हर क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको इसाईहरुको दीर्घकालिन नीति बुझ्दा वास्तवमा नेपाल सतीले सरापेको देश हैन इसाईले सरापेको मुलुक हो भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । ज्ञान देखी ध्यान सम्म नर देखी नारायण सम्मले बसोबास गरेको तपोभूमी नेपाल बिश्वकै दरिद्रहरुलाई ज्ञान, ध्यान र भोजनले तृप्त बनाउँन सक्षम थियो भन्ने अंसख्य प्रमाण भेटिन्छ्न । पूर्विय दर्शन र परम्परागत शिक्षा मुलुकले आत्मसाथ गरुञ्जेल आत्मनिर्भर मुलुक नेपाल पश्चिमा शिक्षा, सल्लाह र रहन सहन पछि दरिद्र मुलुकमा परिणत भइसकेको छ ।
नेपालको मौलिकता, जातीय विविधता, भाषा, संस्कृती, परम्परा, धर्मसंग लोभिएका पश्चिमा इसाई मार्फत हर क्षेत्रमा प्रवेश गराइएको विकृती , विसंगती , ढिलासुस्ती , अराजकता, लोकाचार, पापाचार, भ्रष्टाचारको कारण देश सुदामाको हालतमा पुगेको मान्न के ले रोक्छ ? तात्कालिन दरबारले जन्माएको, भारतले हुर्काएको, इसाईले हाईज्याक गरेको माओबादी ध्वसंको असली मकसद नेपाललाई समुल रुपमा अस्त ब्यस्त बनाउनु थियो भन्ने खुली सकेकै छ । हिन्दू धर्म माथीको हमला, इसाई धर्मको खुलेआम प्रचार र अंसख्य चर्च मार्फत भविष्यमा खेलिने अनेकौ खेलको ‘डिपिसी’ निर्माण फगत पैसाको बलमा सम्पन्न गर्न इसाईलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने अरु कोही नभएर बर्तमान राजनीतिका शीर्ष खेलाडीहरु नै हुन भन्न सकिन्छ । हात धुने बानी बसालौ, टवाइलेट बनाऔं, खुला दिसा पिसाब मुक्त क्षेत्र निर्माण गरौं भन्ने अवस्थामा रहेको जनतालाई पहिचानको राजनैतिक भारी बोकाउनु सोझो नियतले हैन भन्ने आधार अनगिन्ती पाइन्छन ।
नेपालको क्रीम दिमागलाई सकेसम्म आफ्नै तिर लाने नसके डलर र युरोमा किन्ने, आफु सानो भएको हिनताबोध शान्तसंग बसेका मुलुकलाई टुक्र्याउँदै पुरा गर्ने , अधिकार प्राप्तीको नाममा बिधी बिधानलाई कुल्चन प्रोत्साहित गर्ने, अस्तब्यस्तताको नाममा समानान्तर सत्ता चलाउने, केवल कागजमा प्रगती बिवरण खोज्दै पढे लेखेको जमातलाई गैरसरकारी संस्था मार्फत भ्रष्ट बन्न सिकाउने, बेथिती , बिकृतीलाई जानाजान जन्माउने र हुर्काउने, राज्यका सम्पुर्ण अंगलाई कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त बनाई दिने, जनता र सरकारको बीच ठुलो दुरी सिर्जना गरी दिने, राज्य सत्तामा बसेको मानिसलाई जनताको नजरबाट गिराई दिने, मिडिया मार्फत जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने असंख्य इसाई श्रापले भरीपुर्ण चनाहरु नेपाल भरी छरिएका छन् । अंसख्य श्रापयुक्त चनाहरुले दरिद्र भएको मुलुक समृद्धीको नयाँ युगमा प्रवेश गराउँन दक्षिण देखी इसाई सम्मको श्रापहरु केपीले पचाउनु पर्नेछ ।
मोनोरेल, रेल , नेपाली झण्डा सहितको पानी जहाज, नदी किनारको आधुनिक शहर, स्मार्ट सिटी, फास्ट ट्रयाक, अत्याधुनिक विमानस्थल, ठुलाघर र चौडा सडकलाई मात्र समृद्धीको रुपमा देख्ने सरकार फेरि पनि इसाई जालमा फस्ने खतरा विदेशी अनुदान र सहयोगको नाममा भित्रीने छ । आफ्ना देशको मौलिक सम्पतिको संरक्षण गर्न बाट चुक्दै प्राप्त गर्ने भौतिक समृद्धीले देश झनै दरिद्र र कंगाल बन्न सक्ने खतरा ओली सरकारले रोक्न बिगतको गल्ती सपार्नु पहिलो सर्त हुनेछ । अनेक बहानामा छिरेको इसाई मेशेनरीले भित्र भित्रै खोक्रो पारेको सो कल्ड बुद्धीजिबीहरु ,संबैधानिक निकाय र अंगहरुको पुर्नजीवन मौलिक पारामा गर्ने चुनौती सुदामाले श्रापयुक्त चना खाए भन्दा कुनै मानेमा कम हुने छैन । प्रधानमन्त्री बन्न कै निम्ती बिगतमा लिएको बिदेशी अनुदान, सहयोग र सल्लाहको गुन तिर्न लाग्ने कि साँच्चीकै मुलुक निर्माण गर्न लाग्ने ओली सरकारको निम्ती अहम सवाल हुनेछ । आफ्नै ब्यक्तीगत कमजोरी, राजनैतिक शैली, गुटगत मानसिकता र इसाईहरुको गहिरो प्रभावमा घेरिएको उनको बिगत र बर्तमानले सुदामा बन्ने छुट दिन्छ भनिहाल्नु हतार हुनेछ ।